Ukuphupha eMelika ▷ ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ingca engapheliyo, izakhiwo ezibonakalayo kunye neSitampu soKhuseleko - iMelika sele ithathwa njengeyona nkululeko kunye nelizwe elithembisayo apho nabani na onokuhamba esuka kwi-dishwasher ukuya kwi-millionaire. Abantu abaninzi bafudukela kwilizwe lamaphupha, bebaleka ingcinezelo okanye indlala, okanye nje ukuzama ithamsanqa labo.
Iphupha laseMelika lathengwa ngexabiso lokutshabalalisa inkcubeko yaseMelika yaseMelika, kwaye kwabanye iUnited States ligunya elikhulu elingenelela kwezopolitiko zehlabathi kwaye zilandele ezalo izilangazelelo. Umoya wobuvulindlela, njengoko ubuyela kwiimovie zaseNtshona, uphulukene nokukhanya kwawo.
Nangona kunjalo, iMelika isengumhlaba wamathuba angenamda, apho abantu abaninzi behlala khona, njengomhlaba wezixeko ezinomdla kunye neendawo ezahlukeneyo. Ukutolikwa kwamaphupha, iUnited States njengophawu lwamaphupha ikakhulu iquka ii-clichés, njengoko siza kubona kungekudala.
1 Uphawu lwephupha «iMelika» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iMelika» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iMelika» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iMelika» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa kwamaphupha, iphupha elenzeka eMelika okanye elineMelika ngalo mbandela lihlala lisetyenziswa njengomqondiso wenye. Isiqalo esitsha iqwalaselwe. Ephupheni, angathanda ukushiya ngasemva "ilizwe lakudala", elifanekiselwa yiYurophu, kwaye ngenxa yoko uthi ndlela-ntle kumaxabiso amadala okanye iingcinga zesiko lokuziphatha. Lwela utshintsho kwisigqibo ebomini bakho kwaye uye kukhangela ulonwabo.
Ukuba ubona iMelika ephupheni, uphawu lwephupha lumele oko. Suerte kunye mpu meleloZiziphumo zemizamo yakho. Njengakwi-cliche yaseMelika njengelizwe lamaphupha, isimboli yephupha ikwamele ukufezekiswa kweenjongo kwaye UkufunaUkuba iphupha lizama nje ngokwaneleyo
Nangona kunjalo, xa usenza njalo, kuya kufuneka ugcine engqondweni ukuba awuziboni wena kuphela, kodwa nawe ngokwakho. ithathelwe ingqalelo kufuneka uziphathe nabanye. Umoya wokufumanisa unakho, ukuba iphupha alinankathalo kakhulu, kungenjalo ngokukhawuleza libe yinto engenziwanga.
Ukuya eMelika ephupheni kuyafana nethamsanqa, kodwa kunye nombuzo wokuba ufuna ukushiya yonke into ngasemva. Ke ngoko, iphupha kufuneka lijongane nokuba unokwazi okanye awufuni ukwaphula zonke iibhlorho ezisemva kwayo. Xa ukhangela into entsha, akufuneki ungene kuyo. Loco iyeke ihambe, nokuba uziva unesidingo sokuphosa yonke into endala ebhodini.
Uphawu lwephupha «iMelika» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, uphawu lwephupha lukhomba kuwe Ukuxhuzula Kubomi bephupha, inokuba, umzekelo, utshintsho lomsebenzi okanye isigqibo esiza kuguqula into ijonge ezantsi. Ephupheni, ujongana nemiba eyahlukeneyo yale nto intsha: kwelinye icala, umnqweno wesiqalo esitsha, ngaphandle kwezakhiwo ezindala kunye nemigaqo, kwelinye icala, okunokwenzeka Iziphumo.
Abaphambukeli abamhlophe baziphethe ngendlela engacingeliyo nabantu bendawo leyo, iphupha elo lingasisilumkiso sokungenzi okufanayo nakubo. Iphupha elo akufuneki likhohliswe ngokufuna ubunini. Ikwenza uphawu lwephupha kulo Mngcipheko ingqalelo, edibene nokuguqula ubomi bakho bube phantsi.
Uphawu lwephupha «iMelika» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha luthetha Isiqalo esitsha, kodwa ulumkisa ngokuchasene nezixhobo.